ပုဂံရာဇဝင် ထဲက အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ရဲ့ ဖောင်စကြာ(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံးနေသောယာဉ်ပျံကြီး – Nyi Ma Lay
ပုဂံရာဇဝင် ထဲက အလောင်းစည်သူမင်းကြီး ရဲ့ ဖောင်စကြာ(သို့မဟုတ်)ပျောက်ဆုံးနေသောယာဉ်ပျံကြီး
ပုဂံ မင်းဆက်များထဲတွင် အလောင်းစည် သူမင်းသည် အလွန်ဘုန်း ကြီးသော မင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်နီးချင်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယ ခမာနဲ့ထိုင်းတို့က အလောင်းစည်သူမင်းကို နတ်ဘုရားတစ်ပါး လို့တင်စား ကြပါတယ်။
အလောင်းစည်သူ မင်းကြီးဟာ တိုင်ခန်း လှည့်လည်တဲ့ အခါမှာ ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံကို အသုံးပြုကာ လှည့်လည်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အလောင်းစ ည်သူမင်းနတ် ရွာစံပြီးနော က်မှာတော့ ထို ဖောင် စကြာဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ အကြောင်းကိုရေး သားထားခြင်းကို မတွေ့ရှိတော့ပါဘူး။
ထို ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံမှာ အဘယ်သို့ ရောက်ရှိသွားပါသနည်း ?
အလောင်းစည်သူမင်း၏ သာသနာမှာ ဘုန်းကံကြောင့် ရရှိခဲ့သောဖောင်စကြာ ယာဉ်ပျံမှာ အလောင်းစည်သူမင်း နတ်ရွာ စံချိန်မှာ ရုတ်တရက် ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းလား ? ထို အလောင်းစည်သူ မင်း၏ ဘဝ နေဝင်ချိန်မှာ အံသြဖွယ်ေ ကာင်းလှသည်။ မိမိ၏သားအရင်းဖြစ်သော နရသူမင်း၏ ခေါင်းအုံးနှင့်ဖိသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
နရသူမင်းသည် ဖခင် အရင်းကို ကိုယ်တိုင် သတ်မိသည့် အတွက်ကြောင့် မိမိ၏ အပြစ်ကို ဆေး ကြော ရန်အတွက် ထုထည် ကြီးမားလှသော ဓမ္မံရံကြီး ဘုရားကို အကြီး အကျယ် တည်ဆောက် စေသည်။
အုတ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြား အပ်ထိုးလို့ မရအောင်တည်ဆောက်စေသည်။ ထိုနောက် ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ အတွင်းဘက် အခန်းနံရံများအား အသေပိတ်ပစ်စေပြီး ထိုအခန်းများအား တာဝန်ယူတည် ဆောက်စေသော ဗိသုကာ ပညာရှင်များအားလည်း နှုတ်ပိတ်သည့်အနေဖြင့် သေဒဏ်ပေးသည်။
ဓမ္မရံကြီး ဘုရားသည် မြန်မာ သာမက ကမ္ဘာကျော်သော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။ ထိုအပြင် အာကာသပညာရှင်များအား စိတ်ဝင် စား စေသော ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သည်။
ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ တည်ဆောက်ပုံသည် အီဂျစ်ဘုရင်များ တည် ဆောက်ခဲ့သော ပိရမစ် များနှင့် များစွာ ဆင်တူသောကြောင့် အီဂျစ်တို့၏ ဗိသုကာ ပညာနှင့် ပုဂံ နိုင်ငံသားတို့၏ ဗိသုကာ ပညာ သည် ဆက်စပ်မူ ရှိနိုင် သည် ဟု အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များ ရှေး ဟောင်း သုတေသနများက မှတ်ချက် ချကြသည်။
ထို့အပြင် အီဂျစ်တို့ ကိုးကွယ် သော နတ်ဘုရားတံဆိပ်များ နဂါး များအား ပုဂံဘုရားအချို့၌ တွေ့ရှိရမှု နှင့် တစ်ချိန်က ပုဂံဒေသကကိုးကွယ်ခဲ့သော နတ်နဂါးအရည်းကြီး ကိုးကွယ်မှုတို့သည် ဘုံဝါဒ တစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်သည်
ဟု ထင်ကြေးပေးကြပြီး သုတေသနများလုပ်ကာ ရှာဖွေကြသည်။ထို့အပြင် ပုဂံဒေသကဗုဒ္ဓဘာသာအဆောက်အဦးတို့သည် အရည်း ကြီးတို့၏ သာသနာနိက အဆောက်အဦးများ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပုဂံမင်းဆက်ပေါင်းများစွာအပေါ် အုပ်စိုးခဲ့သော အရည်းကြီး သာ သနာသည်ဗုဒ္ဓသာသနာ ထွန်းကားလာချိန်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော်လည်း သက်သေပြစရာအဖြစ် နတ်ရုပ်များ နဂါးရုပ်များနှင့်
အရည်းကြီးတို့ ကိုးကွယ်သော နတ်ဘုရားကျောင်းမှာ အဘယ်ကြောင့် မကြွင်းကျန်ရစ်သနည်း။
သမိုင်းသုတေသန အချို့က ထို နတ်ဘုရားကျောင်းများ အပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဝင်တို့က ပြန်လည် မွန်းမံ ဖြည့်စွက်ပြီး ဘုရားစေတီ တည်ခဲ့သည်ဟု ယူဆကြသည်
( ဤအယူအဆမမှန်နိုင် ) ဓမ္မရံကြီး ဘုရားအား အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသွားစေသည့် အချက်မှာ နာမည်ကျော်အာကာသ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် နာဆာ အဖွဲ့အစည်းထံမှ လျို့ဝှက်စွာ ပေါက်ကြားလာသော
ဓါတ်ပုံများထဲတွင် ဓမ္မရံကြီးဘုရား ဓါတ်ပုံလဲ ပါဝင် လာသည်။
ထိုဓါတ်ပုံကြောင့် အာကာသ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာ ဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့သည်။
ဓမ္မရံကြီးဘုရားသည်လည်းစိတ် ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင် ပဟေဠိ များနှင့်ပြည့် နေသည်။နရသူမင်းသည် အဘယ် ကြောင့် ဘုရားအတွင်းဘက်ခန်းရှိ နံရံများ အား အသေပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း?
တာဝန်ယူတည်ဆောက်သောပန်းရံပညာရှင်များအဘယ်ကြောင့် နှုတ်ပိတ်ပစ်စေခဲ့သနည်း ?
သုသေသနသမားများ ရတနာသိုက် မုဆိုးများ ၏ပြောကြားချက် များ၌ ဓမ္မရံကြီးဘုရား၏ ဌာပနာ တိုက်သည်သာမန်ဘုရားများ၏ ဌာပနာ တိုက်ထက် အလွန်ကျယ်ဝန်းသော အခန်းနှစ်ခန်း ဖြစ်ပုံရပြီး တစ်ခန်း၌ အလောင်း စည်သူမင်း ၏ ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ရတနာများ ဌာပနာ ထားပုံရသည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။
ထို ပညာရှင်များ၏ မှတ်ချက် အရ အလောင်းသည်စည်သူမင်း ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများ ထဲတွင် ဖောင်စကြာ ယာဉ်ပျံလဲ ပါနိုင်လောက်သည်။
အလောင်းစည်သူမင်းသည် မဟာ သမုဒ္ဒရာအား သွားရာ၌ ဖောင်စကြာ ဆိုသည့် ယာဉ်ပျံအား အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုရာတွင် ယခုခေတ်တွင် မဟာသမုဒ္ဒရာအား စကြာဝဠာဟု သတ် မှတ်လျင်အလောင်းစည်သူ မင်း၏ ဖောင်စကြာ ဆိုသည်မှာ အာ ကာသယာဉ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ထို အယူအဆအား ထောက်ပံ ပေးနေသည်မှာ UFo များ နှင့် Alien တို့အကြောင်းအား အသည်းအသန် လေ့လာနေသော နာဆာ အဖွဲ့အစည်းထံမှ ဓမ္မရံကြီးဘုရားအား ရူထောင့်အမျိုးမျိုးက ရိုက်ထားသော ဓါတ်ပုံများကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီများအပေါ်၌ ပျံဝဲနေသော UFO ယာဉ်ပျံ အချို့အကြောင်း ပုဂံ ဒေသ၏ ဘုရားစေတီ အချို့သည် အာကာသသီအိုရီများ Alien Theory များနှင့် ဆက်နွယ်မူရှိသည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ပေ သည်။
ထို့အပြင် ပုဂံဒေသ ဘုရားစေတီ များ၏ပတ်ဝန်းကျင်၌ ကွင်းပြင်အကျယ်ကြီးများ၊ ပုဂံဘုရားအချို့ အား လူတစ်ရစ် နတ်တစ်ရစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည် ဟူသော အယူအဆများ၊ နာဆာအဖွဲ့အစည်း ထံမှပုဂံဘုရား အချို့၏ဓါတ်ပုံ များကြောင့် ပုဂံဒေသသည် UFo များ Alien များနှင့် ပတ်သက်မူ ရှိခဲ့လေ သလား ဟု ယူဆရသော သက်သေများ ဖြစ်သည်။ Credit
ပုဂံ မင္းဆက္မ်ားထဲတြင္ အေလာင္းစည္ သူမင္းသည္ အလြန္ဘုန္း ႀကီးေသာ မင္းျဖစ္ပါတယ္။အိမ္နီးခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ ခမာနဲ႕ထိုင္းတို႔က အေလာင္းစည္သူမင္းကို နတ္ဘုရားတစ္ပါး လို႔တင္စား ၾကပါတယ္။
အေလာင္းစည္သူ မင္းႀကီးဟာ တိုင္ခန္း လွည့္လည္တဲ့ အခါမွာ ေဖာင္စၾကာ ဆိုသည့္ ယာဥ္ပ်ံကို အသုံးျပဳကာ လွည့္လည္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့အေလာင္းစ ည္သူမင္းနတ္ ႐ြာစံၿပီးေနာ က္မွာေတာ့ ထို ေဖာင္ စၾကာဆိုတဲ့ ယာဥ္ပ်ံ အေၾကာင္းကိုေရး သားထားျခင္းကို မေတြ႕ရွိေတာ့ပါဘူး။
ထို ေဖာင္စၾကာ ဆိုသည့္ ယာဥ္ပ်ံမွာ အဘယ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါသနည္း ?
အေလာင္းစည္သူမင္း၏ သာသနာမွာ ဘုန္းကံေၾကာင့္ ရရွိခဲ့ေသာေဖာင္စၾကာ ယာဥ္ပ်ံမွာ အေလာင္းစည္သူမင္း နတ္႐ြာ စံခ်ိန္မွာ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းလား ? ထို အေလာင္းစည္သူ မင္း၏ ဘဝ ေနဝင္ခ်ိန္မွာ အံၾသဖြယ္ေ ကာင္းလွသည္။ မိမိ၏သားအရင္းျဖစ္ေသာ နရသူမင္း၏ ေခါင္းအုံးႏွင့္ဖိသတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
အုတ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကား အပ္ထိုးလို႔ မရေအာင္တည္ေဆာက္ေစသည္။ ထိုေနာက္ ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏ အတြင္းဘက္ အခန္းနံရံမ်ားအား အေသပိတ္ပစ္ေစၿပီး ထိုအခန္းမ်ားအား တာဝန္ယူတည္ ေဆာက္ေစေသာ ဗိသုကာ ပညာရွင္မ်ားအားလည္း ႏႈတ္ပိတ္သည့္အေနျဖင့္ ေသဒဏ္ေပးသည္။
ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏ တည္ေဆာက္ပုံသည္ အီဂ်စ္ဘုရင္မ်ား တည္ ေဆာက္ခဲ့ေသာ ပိရမစ္ မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆင္တူေသာေၾကာင့္ အီဂ်စ္တို႔၏ ဗိသုကာ ပညာႏွင့္ ပုဂံ နိုင္ငံသားတို႔၏ ဗိသုကာ ပညာ သည္ ဆက္စပ္မူ ရွိနိုင္ သည္ ဟု အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ေရွး ေဟာင္း သုေတသနမ်ားက မွတ္ခ်က္ ခ်ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ အီဂ်စ္တို႔ ကိုးကြယ္ ေသာ နတ္ဘုရားတံဆိပ္မ်ား နဂါး မ်ားအား ပုဂံဘုရားအခ်ိဳ႕၌ ေတြ႕ရွိရမႈ ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က ပုဂံေဒသကကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ နတ္နဂါးအရည္းႀကီး ကိုးကြယ္မႈတို႔သည္ ဘုံဝါဒ တစ္ခုတည္းျဖစ္နိုင္သည္
ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကၿပီး သုေတသနမ်ားလုပ္ကာ ရွာေဖြၾကသည္။ထို႔အျပင္ ပုဂံေဒသကဗုဒၶဘာသာအေဆာက္အဦးတို႔သည္ အရည္း ႀကီးတို႔၏ သာသနာနိက အေဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိသည္။
( ဤအယူအဆမမွန္နိုင္ ) ဓမၼရံႀကီး ဘုရားအား အာကာသ သိပၸံပညာရွင္မ်ား ပိုမိုစိတ္ဝင္စားသြားေစသည့္ အခ်က္မွာ နာမည္ေက်ာ္အာကာသ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ နာဆာ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေပါက္ၾကားလာေသာ
ဓါတ္ပုံမ်ားထဲတြင္ ဓမၼရံႀကီးဘုရား ဓါတ္ပုံလဲ ပါဝင္ လာသည္။
တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေသာပန္းရံပညာရွင္မ်ားအဘယ္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္ပစ္ေစခဲ့သနည္း ?
သုေသသနသမားမ်ား ရတနာသိုက္ မုဆိုးမ်ား ၏ေျပာၾကားခ်က္ မ်ား၌ ဓမၼရံႀကီးဘုရား၏ ဌာပနာ တိုက္သည္သာမန္ဘုရားမ်ား၏ ဌာပနာ တိုက္ထက္ အလြန္က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းႏွစ္ခန္း ျဖစ္ပုံရၿပီး တစ္ခန္း၌ အေလာင္း စည္သူမင္း ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ရတနာမ်ား ဌာပနာ ထားပုံရသည္ဟု ထင္ေၾကးေပးၾကသည္။
ထို ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ အရ အေလာင္းသည္စည္သူမင္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ထဲတြင္ ေဖာင္စၾကာ ယာဥ္ပ်ံလဲ ပါနိုင္ေလာက္သည္။
အေလာင္းစည္သူမင္းသည္ မဟာ သမုဒၵရာအား သြားရာ၌ ေဖာင္စၾကာ ဆိုသည့္ ယာဥ္ပ်ံအား အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုဆိုရာတြင္ ယခုေခတ္တြင္ မဟာသမုဒၵရာအား စၾကာဝဠာဟု သတ္ မွတ္လ်င္အေလာင္းစည္သူ မင္း၏ ေဖာင္စၾကာ ဆိုသည္မွာ အာ ကာသယာဥ္တစ္ခု ျဖစ္နိုင္ေပသည္။
ထို အယူအဆအား ေထာက္ပံ ေပးေနသည္မွာ UFo မ်ား ႏွင့္ Alien တို႔အေၾကာင္းအား အသည္းအသန္ ေလ့လာေနေသာ နာဆာ အဖြဲ႕အစည္းထံမွ ဓမၼရံႀကီးဘုရားအား ႐ူေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးက ရိုက္ထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ပုဂံေဒသ ဘုရားေစတီမ်ားအေပၚ၌ ပ်ံဝဲေနေသာ UFO ယာဥ္ပ်ံ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္း ပုဂံ ေဒသ၏ ဘုရားေစတီ အခ်ိဳ႕သည္ အာကာသသီအိုရီမ်ား Alien Theory မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မူရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်နိဳင္ေပ သည္။
ထို႔အျပင္ ပုဂံေဒသ ဘုရားေစတီ မ်ား၏ပတ္ဝန္းက်င္၌ ကြင္းျပင္အက်ယ္ႀကီးမ်ား၊ ပုဂံဘုရားအခ်ိဳ႕ အား လူတစ္ရစ္ နတ္တစ္ရစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္ ဟူေသာ အယူအဆမ်ား၊ နာဆာအဖြဲ႕အစည္း ထံမွပုဂံဘုရား အခ်ိဳ႕၏ဓါတ္ပုံ မ်ားေၾကာင့္ ပုဂံေဒသသည္ UFo မ်ား Alien မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မူ ရွိခဲ့ေလ သလား ဟု ယူဆရေသာ သက္ေသမ်ား ျဖစ္သည္။ Credit
Previous post အရင်းအနှီး သိန်း ၃၀ ခန့် ဖြင့် စတင်နိုင်သော လုပ်ငန်း (၂၁)မျိုး
Next post အိမ်ကို ကွန်ကရစ် နဲ့ ဆောက်ရင်ကောင်းမလားး သံနဲ့ဆောက်ရင် ကောင်းမလား ဆိုသူများ အတွက် အားသာချက်/အားနည်းချက်